Miantehitra amin’ny fangatahan-dava | NewsMada
Miantehitra amin’ny fangatahan-dava
Par Taratra sur 29/12/2016
Maro ny mitaintaina amin’io taona vaovao 2017 io. Be ny faniriana fa tsy vitsy koa ny ahiahy. Raha ny delestazy aloha, efa tsy misy antenaina intsony angamba ho an’ny rehetra ny hiafarany, raha raisina amin’ilay toky fa ho foana ao anatin’ny telo volana, saingy feno ihany ny telo taona.
Amin’izao hafanana migaingaina izao sy ny oram-pahavaratra tsy mety tonga, tsy maintsy mampiahiahy ny lafiny famatsiana ara-bary eto amintsika, satria na ny any Alaotra, sompitr’i Madagasikara, aza tsy afaka manetsa mandraka ankehitriny amin’ity tsy fisian’ny rano ity. Koa raha sanatria izany tokoa ny hitranga, havesatra ny fahantrana sy ny mosary. Tokony ho tsapan’ny tsirairay fa mihatra mivantana amin’ny fiainany andavanandro ny fiovaovan’ny toetr’andro, ny fiakaran’ny maripana. Efa zary tafiditra ao anatin’ny fahita isan’andro ka tsy mahataitra intsony mantsy ireny doro tanety isan-taona eny Ankazobe, Tamponketsa, Anjozorobe, any atsimo, sns ireny.
Tsy fantatra izay fepetra horaisin’ny fanjakana, satria na ny olana amin’ny tsy fahampian-tsakafo any atsimo aza tsy voavaha fa miandry ny Pnud sy ny FAO. Ihazakazahana ny fangataham-bola any ivelany, nefa tsy mety tonga eo am-pelatanana fa zary sora-bola fotsiny no tononina. Sao kopaka isasahana amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ihany anefa izany?
Ny harena ambanin’ny tany jerem-potsiny ny fandrobana atao any Bemainty Ambatondrazaka, ny kolikoly tsy foana, ny tompon’andraikitra sy ny akaiky ny mpitondra tsimatimanota manohy ny ataony. Lazain’ny mpamatsy vola fa ankatoavina ny ezaka atao, fa fepetra vitsivitsy no tsy tanteraka. Fanetriben’ny firenena ny kolikoly, ny fandripahana ny harena voajanahary, ny kiantranoantrano, saingy mitazam-potsiny ny mpamatsy vola.
Izany hoe, tsy haintsika mihitsy izany mitsinjo dieny mialoha ny fiatrehana ny loza hitranga izany, sady miantehitra amin’ny fangatahan-dava any ivelany.